Al-Shabaab oo qabsaday deegaan ka tirsan Gobolka Sanaag | Somsoon
Home WARAR Al-Shabaab oo qabsaday deegaan ka tirsan Gobolka Sanaag
Al-Shabaab oo qabsaday deegaan ka tirsan Gobolka Sanaag
Wararka ka imaanaya degaanka Gacan-Maroodi oo hoos taga degmada Yubbe ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in halkaasi ay qabsadeen dagaallamayaal ka tirsan Al-Shabaab.
Shabaab-ka saakay gudaha u galay deegaankaas ayaa la sheegay inay gaarayaan 70 dagaallame, sidoo kale dadka ku nool deegaankaas waxay sheegeen inay ka yimaadeen dhanka buuraleyda Calmadow ee gobolka Sanaag.
Wararku waxay sheegayaan in dagaalamayaasha oo aad u hubaysan ay dhufaysyo ka samaysteen aga’gaarka waddo hawlbowle ah oo marta deegaankaas muhiimna u ah isku socodka gobolka Sanaag, waxayna dadka ku nool degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee gobolkaas cabsi ka qabaan inay weeraran deegaano kale oo ka tirsan gobolka.
Maalmo ka hor dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degaanka Af-Urur ee gobolka Bari, halkaasi oo dagaal culus uu ku dhexmaray iyaga iyo ciidanka Puntland.
Degmada Yubbe oo qiyaastii 50 km dhanka bari ka xigta magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada Somaliland, waxaana duleedka degmadaas ku sugan ciidamo ka tirsan Puntland.
Article horeXeer ilaaliyihii Maxkamadda ciidamada Somaliland oo isku dhiibay Puntland
Article socoda CC Warsame oo sheegay arrin uu ka walaacsan yahay